तीजमा घाम लाग्छ या पानी पर्छ ? यस्ताे भन्छन् माैसमविद् « LiveMandu
तीजमा घाम लाग्छ या पानी पर्छ ? यस्ताे भन्छन् माैसमविद्
२२ भाद्र २०७८, मंगलवार १०:१४
काठमाण्डौ । बिहीबार अर्थात् २४ भदौमा हरितालिका तीज मनाइँदैछ । त्यसको अघिल्लो दिन बुधबार दरखाने प्रचलन नारीहरूमा छ । अघिल्लो वर्ष कोभिड-१९ कै कारण जमघटसहित तीज मनाउन पाइएन, यो पटक पनि कोभिड-१९ कै जोखिम छ ।
यद्यपि, तीजमा व्रत बस्ने, एकाघर परिवारमा रमाइलो गर्दा समस्य नहुने जनस्वास्थ्यविद्हरूले बताएका छन् ।
अर्काे चिन्ता छ- आइतबार साँझबाट मौसम प्रतिकूल बनेपछि यो पटकको तीज पनि हिलाेमय हुने त होइन ? आइतबार रातिकोजस्तो ठूलो वर्षा नभए पनि सोमबार राति पानी परेको छ ।
बुधबार र बिहीबार दिउँसो भारी वर्षाको सम्भावना नभए पनि बादल लागिरहने र बेलाबेला पानी पर्नसक्ने उनले बताए । जसले तीजकाे पूजाआजा गर्न मठमन्दिर हिँडेका नारीलाई असर गर्नसक्छ- सडकमा हिलाे बढ्न सक्छ ।
तर, तीजको दिन अर्थात बिहीबार राति गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थान र अन्य प्रदेशका एक/दुई स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जसको असर काठमाडौं उपत्यकामा पनि पर्ने मौसमविद् सापेकाटाले उल्लेख गरे । न्युजकारखाना